မြန်မာနိ်ုင်ငံ ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းစဉ် - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မြန်မာနိ်ုင်ငံ ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းစဉ်
ကလေးတို.ဆရာမ မှဧပြီ 14, 2013 9:21pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“ မင်္ဂလာပါ --“
နှစ်သစ်အကူး ဆုထူးတွေခြွေ မေတ္တာတွေ မျှဝေပေးနေကြတာဖတ်နေရ-တွေ.နေရတော့-ကျေးဇူး
လည်းတင် စိတ်လည်းရွှင်ရပါတယ် ။
ဟိုး- -နှစ်တွေ -- နှစ်တွေကတော့ ဒီလိုပဲ တောင်းဆုတွေ ဝေဝေဖြာဖြာနဲ. ဆွေသဟာတွေ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေကြောင်း-အပြင် နှစ်ဟောင်းက အပြစ်အမုန်းတွေကို သင်ပုဉ်းချေ မေ့ဖျောက်ကာ အချစ်အပြုံးတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်း-- --စသည်-စသည်ကိုတော့
ရေးသား မျှဝေပေးခဲ့ဖူးသည်ပေါ့ --
“အင်း--ဒီနှစ်သစ်အကူး နေ.ထူး နေ.မြတ် ချိန်ကာလမှာ ဘာလေးများအမှတ်တရ မျှဝေပေးရပါ့ “--
မှတ်မှတ် ရရလေးလည်းဖြစ် ချစ်စရာ့အရွယ်-လူငယ် လူရွယ်လေးများအတွက် ဘဝတစ်သက်တာ မှတ်သားစရာဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွေး (အင်း -နှစ်သစ်အတွေးပေါ့နော်) ခေါင်းထဲရောက်ပါလေရော။
ကဲ -- ဒီတော့ --ဟောဒီ “ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းစဉ် “ ကိုပဲ နှစ်သစ် ကူးလက်ဆောင်မွန်အဖြစ် စာမျက်နှာ ဖွင့်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ် ။ ပို.စ်အဖြစ် တစ်ကြိမ်တည်း တင်ရန်မလွယ်တဲ့အတွက် အခန်းဆက်တော့ ဖတ်ပေးကြပါနော် ။
ဒီနေ.မှာလည်း ခေါင်းစဉ်နဲ. မာတိကာလောက်ပဲ တင်လို.ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်--
(ဒီစာအုပ်အတွက် “ကျမ်းကိုး“ အဖြစ် စာအုပ်ပေါင်း (၂၅ ) အုပ်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှ
အမှတ်စဉ် အကြောင်းအရာ စာမျက်နှာ
၁။ ။ အမှာစာ ၅
၂။ ။ စာရေးသူ၏ အမှာစာ ၉
၃။ ။ ရည်ညွှန်းစာ ၁၁
၃။ ။ မြန်မာအစ တကောင်းက ၁၂
၄။ ။ ဗုဒ္ဓဝင်အကျဉ်း ၁၄
၅။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသည်မှာ ၂၈
၆။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို.ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ စတင်လာခြင်း ၃၀
၇။ ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ယုံကြည်ချက်များပြောင်းလဲလာပုံ
(၁) ပျူခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၃၂
(၂) ပုဂံခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၃၄
၁) အနော်ရထာနှင့် အရည်းကြီး ၃၅
၂) ရှင်အရဟံနှင့် အနော်ရထာ ၃၆
၃) အနော်ရထာနှင့် ပုဂံပြည် ၃၉
၄) ရှင်အရဟံနှင့် ပုဂံပြည် ၄၃
(၃) ပင်းယခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄၅
(၄) အင်းဒဝခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄၈
(၅) တောင်ငူခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၅၁
(၆) ညောင်ရမ်းခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၅၅
(၇) ကုန်းဘောင်ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၅၈
(၈) ကိုလိုနီခေတ် ဗုဒဘာသာ ၆၂
(၉) လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၆၉
(၁၀)ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၇၁
(၁၁)တပ်မတော်အစိုးရခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၇၂
၈။ ။ သင်္ဂါယနာ မဟာဓမ္မသဘင်များ ဆင်နွှဲကြခြင်း
(၁) “သင်္ဂါယနာ“ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ် ၇၄
(၂) စာပေကျမ်းဂန်လာ သင်္ဂါယနာတင်ပွဲများ ၇၄
(၃) ပထမ သင်္ဂါယနာတင်ရခြင်းအကြောင်း ၇၅
(၄) ဒုတိယ သင်္ဂါယနာတင်ရခြင်းအကြောင်း ၇၆
(၅) တတိယ သင်္ဂါယနာတင်ရခြင်းအကြောင်း ၇၈
(၆) စတုတ္ထ သင်္ဂါယနာတင်ရခြင်းအကြောင်း ၈၁
(၇) ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင်ရခြင်းအကြောင်း ၈၂
(၈) ဆဋ္ဌ သင်္ဂါယနာတင်ရခြင်းအကြောင်း ၈၄
(၉) မြန်မာနိုင်ငံတော်မှ တိပိဋကတ်ဓရ(ဆရာတော်ကြီးများ) ၉၁
၉။ ။ သံဃာတော်များနှင့် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများ၏ ပဋိပက္ခများ
(၁) အင်းဝ သိုဟန်ဘွားခေတ် ပဋိပက္ခများ ၉၂
(၂) ပတ္တိနိက္ကုဇ္ဖနပွဲ(သို.မဟုတ်) သံဃာတော်များက အစိုးရကိုသပိတ်မှောက်ပွဲ ၉၃
(၃) ဒုတိယအကြိမ် ပတ္တိနိက္ကုဇ္ဖနပွဲ(သို.မဟုတ်) သံဃာတော်များက အစိုးရကို
၁၀။ ။ သာသနာသက္ကရာဇ် ဖြိုကြခြင်း ၉၇
၁၀။ ။ မြန်မာ လူမျိုးများ၏ ရိုးရာဓလေ့နှင့် ယုံကြည်ချက်များ
(၁) ရသေ့နှင့် ယောဂီကျင့်စဉ်များ လိုက်စားခြင်း ၉၈
(၂) နတ်ကိုးကွယ်ခြင်း ၁၀၀
(၃) နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာများ ယုံကြည်လိုက်စားခြင်း ၁၀၂
(၄) ဆေးပညာလိုက်စားခြင်း ၁၀၃
(၅) ထွက်ရပ်ပေါက်လမ်း လိုက်စားခြင်း ၁၀၄
(၆) ဘုရားကိုးဆူ ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း ၁၀၆
၁၁။ ။ ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ယုံကြည်မှုဓလေ့ထုံးစံများ
(၁) သြကာသ ကန်တော့ခြင်း ၁၀၈
(၂) သရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ခြင်း ၁၀၉
(၃) ငါးပါးသီလခံယူခြင်း ၊ သီလ၏အကျိုးတရားများ ၁၁၂
(၄) အလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်း ၁၁၄
- ဆွမ်းကပ်ခြင်း ၁၁၅
- ရေချမ်းကပ်ခြင်း ၁၁၅
- ပန်ူကပ်ခြင်း ၁၁၅
- ဆီမီးပူဇော်ခြင်း ၁၁၅
(၅) မေတ္တာပို. ၊ အမျှဝေ ၊ ဒါနပြုခြင်းအကျိုး ၁၁၆
(၆) မိမိပြုသောကုသိုလ်အတွက် အမျှပေးဝေခြင်း ၁၁၇
၁၂ ။ ။ မြန်မာလူမျိုးများ ဘဝခရီးစဉ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ကမ္ဘာ့အမြင်
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ ၁၁၈
(၂) မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၁၂၀
(၃) အိမ်တွင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်း ၁၂၁
(၄) ရပ်ရွာတွင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်း ၁၂၂
(၅) ၃၈-ဖြာ မင်္ဂာလာတရားတော်များ ၁၂၆
(၆) လောကီမင်္ဂလာ (၁၂) ပါး ၁၃၄
(၇) ၁၂-ရာသီ ပွဲတော်များ ၁၃၆
(၈) ဝိပဿနာတရားနှင့် ယနေ.ကမ္ဘယ တစ်လွှားမှ
၁၃ ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု
(၁) ဘာသာစာရိတ္တယဉ်ကျေးမှု ၁၅၄
(၃)ပရိယတ္တိစာသင်သား(ခေါ်) ဗုဒ္ဓတရားတောများကို သင်
ယူလေ့လာ၊ ကျင့်ကြံပွါးများ အားထုတ်နေသူများကို
၁၄ ။ ။ နိုင်ငံတ်ာအစိုးရနှင့် မြန်မာ ဗုဒဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
(၁) သာသနာရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍ ၁၆၁
(၂) သာသနာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းဥပဒေများ ၁၆၃
၁၅ ။ ။ စာရေးသူ၏ အတွေးအမြင်နှင့် ခံယူချက်များ ၁၆၅
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် ဇွန် 9, 2015 က 10:27amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်ှဧပြီ 16, 2013 က 8:18pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အော်-- သမိုင်းမှန်ဆိုတာက ထိန်ချန်ထားခဲ့ လို. ရစကောင်းတာမှ မဟုတ်
တာပဲ “ကိုရွှေမန်း“ ရယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ ရေးသားချက်မှာ ဘယ်သူ.ကိုမှ ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ကိုတော့
သတိထား ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါတယ်- မစိုးရိမ်ပါနဲ.နော်-
ဖိုးကံထူး သည်ှဧပြီ 16, 2013 က 5:55pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
၁၄ ။ ။ နိုင်ငံတ်ာအစိုးရနှင့် မြန်မာ ဗုဒဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ မဖော်ပြပါနဲ့လားရှက်လို့ပါဗျ
hla moe 24 သည်ှဧပြီ 16, 2013 က 7:50amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။